गाडी चम्काउने ठिटो | Wagle Street Journal
गाडी चम्काउने ठिटो
दिदी लिन भिनाजू जन्ती लिएर आएका थिए, बसमा । अर्को दिन त्यसैमा चढेर कमलबहादुर खड्का दिदी पुर्‍याउन गएका थिए । कमलको जिन्दगीमा त्यो पहिलो गाडी चढाइ थियो । ‘त्यो दिन उल्टीमात्र आयो, चक्करले ज्वरै आयो’, कञ्चनपुरको कालिका गाविस- ६, महेन्द्र बस्तीदेखि महाकालीपारि दोधारासम्मको यात्रा सम्झिए कमलले, ‘दुई दिनपछि बसमा आए, त्यतिखेर पनि उल्टी भयो ।’
त्यो १५ वर्ष अघिको कुरा । जिन्दगीका थुप्रै मध्येको संयोग हो, पहिलो यात्रामा उल्टी गरेर गाडी फोहोर गर्ने कमलबहादुर खड्काको अहिले पेसा भा’छ- गाडी सफा गर्ने । फरक यत्ति हो, उल्टी नेपालमा बसमा भएको थियो, सफा उनी दिल्लीमा भारतीयहरूका साना गाडी (कार) गर्छन् । मान्छे र गाडीको सम्बन्ध पनि अजीवकै छ ।
सन् १८८५ मा ‘मोटरवागेन’ बनाउँदा कार्ल बेन्जले त्यो मानिसहरूले चढ्ने ठानेका थिए । उनी सही थिए । आधुनिक गाडीका आविष्कारक मानिने ती जर्मनले १८८८ देखि १८९३ सम्ममा करिब २५ बेन्ज गाडी बेचे । त्यही वर्ष उनले सामान्य जनताले किन्न सक्ने गाडीको मोडल ल्याए । त्यसयता विश्वका अर्बौंले गाडी चढेका छन् र बेन्जजस्ता भाग्यमानी तथा प्रतिभाशाली केहीले चाहिँ आफूलाई गाडीका ब्रान्डका रूपमा स्थापित गरेका छन् । बेन्जले अर्का जर्मन इन्जिनियर गोट्टेलिव ड्याम्लरसँग सहकार्य गरेकैले हामीले ‘ड्याम्लर-बेन्ज’ गाडी देखेका हौं । जर्मनीकै विल्हेल्म माइबाखको थर प्रयोग गर्ने गाडी अहिले संसारकै महँगो मध्येकोमा पर्छ । अमेरिकी हेनरी फोर्डले १९०३ मा स्थापना गरेको फोर्ड कम्पनी विश्वको चौथो ठूलो मोटर निर्माता हो । जापानका किइचिरो टोयोडाले आफ्नो थरको ‘डी’लाई ‘टी’मा बदलेसँगै अगस्ट १९३७ मा कम्पनीको नाम टोयोटा राखे ।
विश्वकै ठूलो मोटर कम्पनी टोयोटाका महँगा कार किन्न नसके पनि हामीमध्ये धेरैले कम्तीमा १० रुपैयाँ तिरेर नेपालभरि छ्यासछ्यासी चल्ने ‘टोयोटा ह्यास’ माइक्रोबस पक्कै चढेका छौं । टोयोटाकै पूर्वकर्मचारी सोइचिरो होन्डाले, हामीलाई थाहै छ, आफ्नो थरलाई विश्वभरि बाइक र कारको ब्रान्डका रूपमा चिनाएका छन् । १९०९ मा जापानकै सानो गाउँ हामामात्सुमा ‘सुजुकी लुम कम्पनी’ खोलेका थिए, मिसियो सुजुकीले । काठमाडौंमा गुड्ने प्रत्येकजसो ट्याक्सीमा देखिने ‘मारुती सुजुकी’को सुजुकी तिनै जापानीको थर हो । सुजुकीले ८० को दशकयता भारतमा बनाएका गाडी ‘मारुती-सुजुकी’बाट चिनिन्छन् ।
सुजुकीले भारतमा कार बनाउन थालेको २५ औं वर्ष हालै पुग्दा यहाँका सडकमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको विश्वले महसुस गरेको छ । २००८ मा भारतमा राष्ट्रिय र विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले २३ लाख गाडी उत्पादन गरेर यसलाई विश्वको नवौं ठूलो गाडी उद्योगको हैसियत दिलाए । भारतीय सहरहरूमध्ये दिल्लीमा सबैभन्दा बढी गाडी छन् । बढ्दो जनसंख्या र तिनको सुध्रँदो आर्थिक अवस्थाले कारको संख्या बढाएको हो । घरमा ठाउँ नहुँदा गाडी सकेसम्म अगाडिको या नजिकैको सडकछेउ राखिन्छन् । काठमाडौंमा बाइकचोरको विगविगीजस्तै छ, दिल्लीमा कारचोरको । त्यसैले दिनभरि गुडेर हिलाम्ये/धुलाम्ये भएका गाडी राति सुरक्षा गर्ने र बिहानै सफा गर्ने जिम्मा देशमा रोजगारी नपाएर विदेशिएका कमलजस्ता गरिब नेपालीको ।
बिहीबार राति १० बजे दिल्लीको जंगपुरामा यो लेख्दै गर्दा बाहिरको सडकमा २५ वर्षे कमलको ‘चौकिदारी ड्युटी’ सुरु भा’छ । त्यसबापत उनले महिनामा २२ सय भारु पाउँछन् । बिहान पाँच बजेतिर उनी मोहल्लाका २२ वटा गाडी सफा गर्छन्, जसबाट अर्को २५ सय कमाउँछन् । एउटा टालोले माटो/धूलो झारेपछि अर्कोले उनी गाडीको जीउ र सिसा पुस्छन् । सातामा एकपटक जस्तो भित्रका म्याट सफा गर्नुपर्छ । १० बजे काम सिध्याएर आधा घन्टा हिँडेपछि उनी कोठामा पुग्छन्, जहाँ आफ्नोजस्तै कामबाट फर्केका चारजना कञ्चनपुरेलाई भेट्छन् । ‘त्यतिबेला सबैभन्दा रमाइलो’ उनले भने- ‘कसैले आटा बुन्नी, कसैले सब्जी बनाउने, कसैले रोटी । साथीहरूसँग हाँसोमजा हुन्छ, खाना बनाउँदा ।’
‘हाँसोमजा’ गर्नमात्र महिनामा १४ सय पर्ने कोठामा पाँचजना बसिएको होइन । ‘एक्लै बस्दा भाडै तिर्न सकिन्न, मेन त’ कमलले भने- ‘पैसा नबच्ने भयो ।’ घरमा के पठाउनु ? महेन्द्र बस्तीमा उनकी पत्नी, उनीहरूको तीन वर्षे छोरो, बाबु/आमा, सात र दुई कक्षाका भाइ र एक बहिनी छन् । दुई दिदी र एक बहिनीको बिहा भयो । दाजु भारतकै ‘सुरततिर यस्तै नोकरी गर्छन् ।’
वनबासाबाट बस चढेर पहिलोपटक दिल्ली उत्रँदा उनी १९ वर्षका थिए (त्यसपाली पनि उल्टी भा’थ्यो) । त्यतिबेला दाजुले चौकिदारी गर्ने जंगपुराकै ए ब्लकको एउटा कोठी (घर) मा कमलले लगभग तीन सालजति खानासाना बनाइदिने, सफाइ गरिदिने गरे । त्यही कोठीमा काम गर्दा उनले पहिलोपटक सानो गाडी (स्यान्ट्रो) चढेका थिए । (‘चक्कर चल्यो, तर उल्टी भएन’, उनले भने- ठूलोमा जस्तो धेरै धक्का नदिने ।’) ‘त्यहाँ तनखा नबढाउने’ भएपछि उनले नजिकैको ब्लकमा चौकिदारी थाले । सराइको आसपासमै उनले बिहा गरे । कतिन्जेल यो काम गर्ने हो, उनलाई पत्तो छैन ।
स्टेरिङ त सफा गर्दामात्र छुने हो, चलाउन आउँदैन । तर आफूले धुने गाडीहरूको नाम र लगभग मूल्य कमललाई थाहा छ- ‘स्कार्पियो’ (१० लाख), ‘होन्डा सीटी’ (६/७ लाख), ‘इस्टिम’, ‘अल्टो’, ‘एटहन्ड्रेड’ र ‘वागनर’ । ‘हाम्रो लागि सबै राम्रो’ गाडीहरू बारेको एक प्रश्नमा कमलले आधा हाँसो फ्याँक्दै र मलाई हेर्दै भने । उल्लेख गर्न दबाब दिएपछि दुई वर्षअघि १५ सयमा किनेको सेकेन्ड ह्यान्ड ‘एटलास’ साइकलका मालिकले भने- ‘स्कार्पियो होला । अलि ठूलो, अलि बलियो ।’ केही अघि कञ्चनपुरकै ड्राइभर साथीले होन्डा सीटी ल्याउँदा उनी त्यसमा छिरेर केहीबेर घुमेका थिए । त्यो अनुभवलाई उनले ‘आनन्द’, ‘धक्का नआउने’ र ‘एसिभ’काले चिसो’ जस्ता शब्दबाट वर्णन गरे । भाग्यमा रै’छ भने कमल एकदिन आफ्नै गाडी पनि चढ्लान, तर तत्काललाई उनको प्राथमिकता अर्कै छ । ‘जमिन किनौला भन्ने विचार छ’, लजालु, कम र छोटा वाक्य बोल्ने तथा निकै कम हाँस्ने कमलले भने- ‘गाउँतिर ।’
यो लेख आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्नेभए यहाँ छ ।
१. A Life Ordinary: Story ofaNepali Chowkidar in Delhi
This entry was posted in दिल्ली जीवन and tagged कार, गाडी, चौकिदार, दिल्ली, नेपाली, भारत on August 8, 2009 by Dinesh Wagle.
← अफगानिस्तानमा जो बाँचे Face Value: BeingaNepali in India →